Makiyi gumi ekudyara nekuchinjika | Ehupfumi Zvemari
Makiyi gumi ekudyara mari zvinonzwisisika
Imwe yemaitiro akanakisa ekuita chero mari yemari ndeyekuvamanikidza pasi pemamiriro ekuchinja. Ichi chiitiko chinonyatso kugadzirisa mashandiro evarimi. Nekuda kwemhedzisiro miviri inogadzirwa nekushandiswa kwemuenzaniso uyu unogara uchifamba zvine hunyanzvi uye kusvika padanho rekusimudzira kudyara zvakawanda zvinobatsira kupfuura pakutanga. Ichi chinhu chaunogona kuona kubva ikozvino zvichienda mberi, kwete chete mumisika yemasheya asi zvinopesana mune chero mhando yemari yemusika, kusanganisira avo vane mari yakatarwa.
Mhedzisiro inokonzerwa nekuchinjika mune zvekudyara ine mbiri mbiri inoratidzwa muzviito zvako zvega. Kune rimwe divi, neanokosheswa yakawedzera kudzoka pane kuchengetedza, inogara iri pamusoro pekushandisirwa kweamwe maringe kana mashoma maitiro ekudyara. Uye kune rimwe divi, uye zvisina kukosha zvakanyanya, kuburikidza nekudzivirira kweako wega kana emhuri nhumbi. Kusvika pakuti iwe unozogona kuzadzisa zvinangwa zvako zvaunoshuvira mumisika yemari.
Pasina mubvunzo, akateedzana ezvekurudziro anozo sarudza yekutamisa neyakanyanya budiriro iyo maneja ezvese zvaunochengeta inoitirwa misika yezvemari. Nekuti mukuita, kuchinjika kunoitwa neimwe nzira yekuona, kwete chete misika yemasheya asiwo mamwe ese uye uko kunonzi dzimwe nzira kunoita basa rakakodzera kwazvo. Saka ndiyo nguva yekuti iwe ugone kuwana izvo zvirimo uye ivo pasina mubvunzo vachapa hukuru hwakachinjika kune ako mashandiro mune chero mhando misika yemari.
1 Chekutanga kiyi: kusiyanisa
2 Chechipiri kiyi: mapfupi kukura
3 Chechitatu kiyi: kuvhura mikana
4 Kiyi yechina: usatarise pazvivakwa
5 Chechishanu kiyi: zvigadzirwa zvine mvura
6 Yechitanhatu kiyi: kushingaira manejimendi
7 Yechinomwe kiyi: sanganisa mari
8 Yechisere kiyi: usanyanya kuve anodawo
9 Pfumbamwe kiyi: dzivisa kusagadzikana
10 Yegumi kiyi: Nyorera zvakasanganiswa
Kubudirira kwekuita kwako pasina mubvunzo kunoenderana nekuti unokwanisa here siyana navo nenzira kwayo kubva zvino zvichienda mberi. Kwete chete kubva kuequity asi kubva kune yakamisirwa mari kana kunyangwe kubva kune mamwe mamodheru mamodheru kana zvirinani zvine zvishoma zvakajairwa. Iko kwaunenge usina sarudzo asi govera mari yako inowanikwa pakati pezvigadzirwa zvakasarudzwa nguva dzese. Chero zvingave izvi zvingave uye nhanho yenjodzi inobatanidzwa mukuita kwako Saka kuti nenzira iyi, mari inochengetedzwa zvirinani kubva pazviitiko zvine njodzi kumisika yemari.
Chechipiri kiyi: mapfupi kukura
Kana zvakare haudi kusanzwisisika mune zvako zvekudyara, zano rakanyatsonaka rinenge risiri rekutungamira kudyara kune yepakati nepakati refu. Hazvishamisi kuti munguva pfupi yekugara uchave nemikana yakawanda yeku gadzirisa zvikanganiso yawakazvipira mumusika wemasheya kana mimwe misika yemari. Kunyangwe nesarudzo yekuchinja kubva kune imwe uchienda kune chimwe chigadzirwa chemari. Kwete zvisina maturo, mushure memakore mazhinji, iwe unogona kuita zvikanganiso izvo zvechokwadi zvinogona kuyera pasi kuchengetedza kwako. Sezvazvakaitika kune chikamu chakanaka chevashambadziri vadiki nepakati, kunyanya munguva dzekunetsa kwehupfumi uye kunyongana kwezvematongerwo enyika.
Chechitatu kiyi: kuvhura mikana
Kana chako chishuwo chiri chekuwedzera iyo purofiti yemari yako, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekungwarira mikana mitsva yebhizinesi. Pasi peiri zano hapana mubvunzo kuti gore rega rega uchavandudza pfungwa yemari dzako kubva pane ese maonero. Nekudaro, zvinokurudzirwa kwazvo kuti iwe uvhure kunzvimbo dzekudyara dzinogona kubatsira zvakanyanya pasina kunyatso kuzivikanwa. Kubva pane ino system yesarudzo iwe unogona kubudirira kudzoka pamusoro pe10%, kunyange chiri chokwadi zvakare kuti kutora njodzi dzakawanda mune yega yega maitiro ako. Asi muzviitiko zvakawanda, nemhedzisiro yakanaka kwazvo kune zvaunofarira. Icho chinhu icho iwe chaunofanirwa kufunga nezvacho kubva kune chero mhando maitiro. Ehe, iwe haugone kuvhara mukati pamisika yemari isati yashandiswa nevamwe vashoma nepakati varimi.
Kiyi yechina: usatarise pazvivakwa
Imwe yemazano anonyanya kubatsira ndeyekuti iwe uzvizarurire kune mamwe emari nzvimbo dzinopfuura dzenyika. Iri izano rinokutendera kuti uwane mikana mitsva yebhizinesi uye utore mukana wekubatana kweumwe neumwe wavo. Nekuti pachave nenguva apo kukwidziridzwa mumisika yemari yenyika yapera. Zvakanaka, ino ichave iri nguva yekupedzisira yekuenda tsvaga zvinhu zvitsva kana misika yezvemari. Kunyanya, avo vane yakanyanya mamiriro ezvinhu ekuvhura nzvimbo nemamiriro ari nani mune avo indices indices. Nenzira iyi, iwe unenge uchive uchibvisa zvingangoitika njodzi mukuvhura mashandiro.
Chechishanu kiyi: zvigadzirwa zvine mvura
Kana iwe uchida kusave nezvinetso zvakawandisa nemari yako yekudyara, nzira yakanakisa yekuzadzisa izvi ndeyokuita kondirakiti yezvigadzirwa zvemari nemari yakawanda. Izvi mukuita zvinoreva kuti unogona buda munzvimbo dzavo pasina matambudziko akawandisa. Semuenzaniso, mukutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya kubvira panguva ipi neipi unenge uchikwanisa kugadzirisa zvinzvimbo kuti uve nemari muakaundi yako yekuchengetedza. Chero zvazvingaitika, izvo zvausingafanire kuita kunyorera mamodheru ane maturities akareba uye anogona kugadzira zvinopfuura chiitiko chimwe mumaakaundi ako ega. Wakatarisana nekudiwa kwekutarisana nhevedzano yemari muhupfumi hwako hwemumba.
Yechitanhatu kiyi: kushingaira manejimendi
Iko hakuna kupokana kuti urwu rudzi rwe manejimendi zano rinokubatsira iwe kunatsiridza kudzoka kwako pane zvirimwa. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti iwe unogona kutora mukana wezviitiko zvisina kunaka pamisika yemari. Zvakare iwe haugone kukanganwa kuti uchafanirwa gadziridza yako portfolio nguva nenguva kuenderana nemamiriro matsva anoiswa nemisika yemari. Nekudaro, hazvisi zvese zvigadzirwa zvemari zvinopa hunyanzvi uhu uye mupfungwa iyi mari yekudyara ndiyo imwe yemienzaniso inomiririra yeanoshanda manejimendi. Kirasi yekudyara iyo mumakore achangopfuura yakawana kukosha kwakakosha pakati pevashambadzi vadiki nepakati.
Yechinomwe kiyi: sanganisa mari
Ehezve, budiriro yemabasa ako ichauya kubva mukushandisa kweiri zano uye nekupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Izvi zvinoreva kuti haufanire kungoisa mari yako muzvikwereti. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe unofanirwa kuisanganisa pamwe nezvinhu kubva pamari yakatarwa. Saka nenzira iyi, unogona kudzikisira zvinogona kuitika kurasikirwa yezviitiko zvakanyanya kushata mune chero musika wezvemari. Kana iwe ukatevera rairo iyi, hapana mubvunzo kuti kubva ikozvino zvinhu zvichange zviri nani kwauri. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti iwe unotora njodzi shoma mukushanda, kunyange zvimwe zvacho zvichizoita zvakanyanya kupfuura zvaitarisirwa.
Yechisere kiyi: usanyanya kuve anodawo
Kana iwe uchida kubudirira mubato rekudyara, haufanire kuseta zvinangwa zviri kure chaizvo nezvazvinogona kukanganisa zvaunotarisira sewe investor. Zvirinani kuti iwe uise zvinangwa zvinokwanisika kunyangwe zvisiri zvehukasha. Ehe, hazvidiwe kuti iwe uwane mareti pamusoro pezvaunogona kuita sezvo iyi mamiriro isingawanzo kuzadzikiswa. Zvibereko zvidiki zviri nani asi inogona kuve inishuwarenzi. Kunyangwe uchiziva kuti mune zvakaenzana zvigadzirwa, kudzoka pane kudyara hakuwanzo kuvimbiswa. Mumwe wemienzaniso mishoma unomiririrwa neinonzi yakavimbiswa mari yekudyara. Uye kune rimwe divi kuburikidza nezvikamu zvakagoverwa nemakambani akanyorwa pamisika yemasheya. Neyegore negore uye yakatarwa inodzoka pamusoro pe5%.
Pfumbamwe kiyi: dzivisa kusagadzikana
Kana uchikwanisa, iwe unofanirwa kugara kure nezvinhu zvine simba zvemari. Ivo havasi shamwari dzakanaka dzekufamba kune mamwe ma profiles mune madiki nepakati varimi. Hazvishamisi kuti ivo vanogona kuve vanopesana zvakanyanya nekuti vanogona kukutora iwe kune zvinorasika kuti ugadzirise mune chirevo chako chemari. Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kuve neakakura kudzidza kushanda neiyi kirasi yezvigadzirwa zvemari. Iko kune njodzi dzakanyanya kukura uye unofanirwa kudzidza kugara nadzo. Haisi iyo mhinduro yekutsvaga yakanakisa kudzoka pamusika, asi zvinopesana.
Yegumi kiyi: Nyorera zvakasanganiswa
Kana iwe usiri kuda kuomesa hupenyu hwako mukudyara, imwe yeakanakisa marongero akavakirwa pakugadzira izvo zvinonzi zvakasanganiswa zvigadzirwa. Ndizvozvo sanganisa mari yakatarwa neyekusiyana uye kuti vane mhedzisiro inogutsa kwazvo kune zvako zvaunofarira. Kubva pane ino mamiriro, zviri pachena kuti mari yekudyara ndeimwe yeavo vanomiririra. Asi kune zvekare zvimwe zvidiki zvinozivikanwa, senge, semuenzaniso, madhipi akabatanidzwa kune mamwe emari midziyo (kutenga nekutengesa masheya, simbi dzakakosha, mbishi zvigadzirwa, nezvimwewo).
Uye pakupedzisira, iwe unofanirwa kudzidza kuti usavhunduke mune zvakanyanya kusarongeka zviitiko zvako zvaunofarira. Nekuti dai zviri izvi, waizomanikidzwa ku kuvhara mabasa akaremara mune chirevo chemari. Kune imwe nhanho, iwe unofanirwa kuziva kuti chero yemari nhumbi inoshanduka mumutengo zuva rega rega uye pane nguva apo zvinhu zvinogona kuenda zvakashata chaizvo. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekutora aya mamiriro nerunyararo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Makiyi gumi ekudyara mari zvinonzwisisika
Maitiro ekugadzirisa pakati pemari yekudyara
Ndezvipi inshuwarisi zvinosungirwa kuita chibvumirano?